Internet access should be guaranteed all the time | MISA Regional
Home 9 News 9 Internet access should be guaranteed all the time
Statement on the recently reported internet throttling in Zimbabwe.
MISA Zimbabwe therefore urges the authorities in Zimbabwe, including the Ministry of Information Communication Technology, Postal and Courier Services and the regulator, the Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ) to jealously guard the openness of the internet and improve the quality of service.
This will also be in line with implementation of the recommendations proffered to Zimbabwe during the recent 40th Session of the Universal Periodic Review that the same rights protected offline, should equally be protected online.
Further, in this election season, it should be noted that internet access is critical for access to election related information which is crucial in enabling Zimbabwean citizens to exercise their political rights and make informed decisions and choices.
In that regard, any alleged restrictions on the internet will therefore impact on the freeness and fairness of the nature of elections in Zimbabwe.